5 Smart Nzira dzeKubata Dzakadzika Vanhu Vanorerutsa Hwako Hupenyu Sarudzo - Blog
5 Smart Nzira dzeKubata Dzakadzika Vanhu Vanorerutsa Hwako Hupenyu Sarudzo
Kuzvikomberedza nevanhu vanotsigira ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvekuve neutano uye kufara. Zvisingadziviriki, zvakadaro, iwe unozotarisana nevanhu vakasiyana siyana vanozvidza sarudzo dzako dzehupenyu uye vanokuisa pasi.
Unogona kugutsikana zvakakwana nehupenyu hwako, asi panogara paine mumwe munhu anokuudza kuti uite zvimwe, uve nani, uye uzvisundire mberi.
Aya marudzi asina kudzika anoziva zvishoma nezve rugare rwepfungwa uye runyararo runobva kuva nekutenda izvo zvaunazvo. Pane kudaro, vanozvidza avo vavanoona se 'kugadzirisa' muhupenyu.
Heano mashanu anobatsira matipi ekukubatsira kuti urambe uchitonhorera uye kugadzirisa kwavo negativity…
1. Tsvaga Outlet
Chekutanga zvinhu kutanga, iwe unofanirwa kudzidza maitiro ekugadzirisa kusagadzikana uye kushushikana, sezvo iwe uchisungirwa kuzviwana pazvikamu zvakasiyana zvehupenyu hwako.
Kuva nenzvimbo yekugadzira yekunetsana kwako kunogona kubatsira zvakanyanya - chinyorwa , shanda kunze, kana kutora maceramics… chero zvinokushandira!
Zvisinei unofara uine sarudzo dzako, pachave nemumwe munhu anovandira mumimvuri, akagadzirira kukuisa pasi. Izvi zvinogona kunetsa uye isu tinowanzorega manzwiro aya achimira kure kwenguva refu.
Kutsvaga nzira yekuburitsa aya manzwiro asina kunaka, pane kuarega iwo pakupedzisira achiputira pamusoro, kwakakosha zvakanyanya kune hupenyu hwako.
Iva netsika yekuita zvinhu zvinoita kuti unzwe zvakanaka, zvese nepfungwa uye nemuviri.
Kuva nezvinhu izvi zvekuzvivaraidza nazvo zvinokugadzika chaizvo muhupenyu hwese, uye zvinogona zvakare kuve chaiyo chaiyo yekugadzirisa maitiro kana iwe ukazombowira panguva dzakaoma.
Iwe unogona kusakwanisa kudanidzira kune vamwe vanhu nekukuisa iwe pasi, asi iwe unogona kuburitsa hasha dzako dzese pane punch-bhegi pane yekurovedza muviri.
Zvinogona kunetesa kana vamwe vanhu vachiramba vachibvunza zvisarudzo zvako uye vachinyanyisa-kutsoropodza, uye zvinogona kutungamira kune yakati rebei dambudziko.
Izvi zvakajairika, usavhunduke! Zvisinei wakasununguka iwe une nesarudzo dzako, kuva nazvo zvakadzokororwa kubvunzwa kunozopedzisira kwaita kuti iwe ubvunze ivo pachako.
Gadzira runyorwa rwezvinhu iwe zvaunoda nezve hupenyu hwako, kana zviri izvo kusaroora uye yakazvimiririra (isina kusurukirwa uye isingadiwe!), unozvishandira uye wako mukuru webasa (kwete simbe!), Kana mubereki wekugara-pamba (kwete munhu akasiyiwa!).
Vanhu vasina kudzika uchasarudza kuona divi rakashata rezvimwe zvehupenyu hwako, uye zviri kwauri kuti ugare uine tariro.
Kuva nerunyorwa runobatsira rwezvinhu zvaunokoshesa nezve mararamiro ako zvichaita kuti zvive nyore kwazvo kubata kushoropodzwa kwevamwe vanhu.
nhetembo yevanodiwa vakafa
Iwe haufanire kupembedza sarudzo dzako kune chero munhu, asi mhando yevanhu vanokuzvidza newe vachakusiya wega kana vachinge vaona kuti vari kurwa hondo inokundwa.
Kunyanya kuva nehanya nezvauri kuita, kashoma kuti ivo varambe vachizvishora.
3. Rega Uende
Rangarira kugadzikana uye kugutsikana iwe (kana kuti uri kushanda nesimba sei kuvandudza hupenyu hwako kana usiri 100% yezviri mukati) uye rega kuenda kune vamwe vanhu mafungiro akashata.
Izvi zvinogona kuve chinetso chaicho pane dzimwe nguva, hongu, asi chikamu chekurarama hupenyu hwako hwakanakisisa hachisi kugumburwa nemafungiro evamwe vanhu pamusoro pako.
Zvinogona kutaridzika kunge zvisingaite, kunyanya kana munhu ari kukushoropodza ari mumwe munhu waunoona nguva dzose. Kana ari shefu wako kana waunoshanda naye, ronga imwe-yega uye gadza mimwe miganho yakajeka yehunhu hwakakodzera, wobva waenderera mberi.
Iwe haufanire kunge uri kumagumo ekugashira kwakanyanya kusagadzikana, uye zvinozopedzisira zvaita kuti unetseke uye ushushikane. Ita nepaunogona napo kuti usapinze mumamiriro ekumanikidza, nekuti izvi zvinogona kungopera zvakashata.
Ino ndiyo nguva yakanakisa yekurega kusagadzikana uye kuenderera mberi. Nepo vamwe vanhu vachizogara vaine maonero pane zvauri kuita nehupenyu hwako - ingave nhengo yemhuri kana mumwe munhu anobva kubasa - hazvisi zvechokwadi bhizinesi ravo kunze kwekunge zviri kuvakanganisa.
Sarudzo yako yekuve nevana, kana kusava nevana, kufamba, kana kutanga rako bhizinesi chimwe chinhu chauri kusarudza kuita nehupenyu hwako, uye haidi kutongwa kana kuiswa pasi nevamwe vanhu.
Rega kuenda kune zvakasarudzika zvakakukomberedza uye bvuma kuti vamwe vanhu vanogara vachingoita kagodo, hasha, kana kunyengera !
Sei Kusatarisira Zvinofungwa Nevanhu Nezvewe
5 Zvikonzero Zvakanaka ZveKurega Kuzvitaurira Pasi Pasi Nguva Yese
4. Iva Anonzwira Tsitsi
Izvi zvinganzwika sezvisinganzwisisike, zvichipiwa kuti kuve nevanhu vanozvidza sarudzo dzako dzehupenyu vanogona kunzwa sekurwiswa pachako!
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti maonero evamwe vanhu pamusoro pako anowanzo kuve kuratidzwa kwemaonero avanozviona ivo pachavo.
Vanhu vari kutsoropodza hupenyu hwako vangangodaro vasina kufara nehupenyu hwavo, saka izvi zvinogona kuve chiratidzo (kana kutaura kwepfungwa, a fungidziro ) yavo yekusava nechokwadi.
Ivo vanogona kutogumbukira mararamiro ako, uye vosarudza kuzvishora pane kubvuma kuti havasi kufara nehupenyu hwavo.
Rega izvo zvisisakushumire, uye ita nepese paunogona kuti uenderere mberi uchibva kune vanhu vanoita kunge vane chinangwa chekuita kuti unzwe wakashata nekuda kwayo chete.
Kuva netsitsi mumamiriro ezvinhu aya kunogona kuve kwakaomarara, kunyanya kana iwe uchinge wadzvanywa uye uchimanikidzwa kuenda kunzvimbo inopaza!
Edza kuuya nemimwe mhinduro dzakanaka pamberi kuitira kuti iwe uwedzere kugadzirira - zvinogona kuve nyore kupopota paunenge uchitsamwiswa.
Iva nechimwe chinhu chakanaka chekutaura uye ita nepaunogona napo kubatsira munhu wacho kana zvikava pachena kuti pane zviri kuitika kuseri kwekurwiswa kwavo.
Ibasa rakaoma, asi uve munhu mukuru uye iva netsitsi kune avo vakakukomberedza .
Kana vanhu vari kutsoropodza hupenyu hwako vari padyo newe, zvingave zvakakodzera kutora zvavanotaura mundege. Kana iwe uchinzwa kuti vanhu ava zvechokwadi vane hanya nezvakanaka zvako pamoyo, vanogona kunge vari kungoratidza kunetseka kwakanaka.
Chinhu chakakosha ndechekuti uri kufara nehupenyu hwako, uye nesarudzo dzaunoita.
maitiro ekupa rairo kushamwari ine matambudziko ehukama
Kana iwe uchifunga kuti mumwe munhu wepedyo ari kuedza kuve anovaka pamwe nekushoropodza kwavo, nyora zvinyorwa, ita shuwa kuti vanonzwisisa kuti vanogona kunge vari kukuita kuti unzwe wakashata nenzira yavanoratidza kunetseka kwavo, uye kutora nguva yekufungisisa.
Maonero akasiyana anogona kubatsira - hauiti inoda kusimbiswa kana kubvumidzwa kubva kune vamwe , asi zvakakosha kutora mamwe maonero uchifunga kana iwe uchivimba kuti ivo havasi kutaura zvinhu kuburikidza nehukasha.
Ita shuwa kuti vanhu vari kutaura newe vanonzwisisa kuti izvo zvavari kutaura zvinogona kusangana nenzira isina kunaka, uye kuti une shungu dzekudzivirira chero huturu kana gakava.
Kuva neshamwari yepedyo kana nhengo yemhuri iri kutamba mumiririri wadhiyabhorosi newe inogona kuva nzira huru yekukanganisa mazano kutenderera uye inogona kuve nemhedzisiro yakanaka.
Chero sarudzo dzawakaita, kana dzauri kuita, ndedzako. Nepo tsitsi uye hanya zviri chaizvo zvakakosha zvehunhu hwako, iwe zvakare unofanirwa kuve neudyire kana zvichidikanwa.
Dzidza ku ita zvisarudzo zvako pachako uye gutsikana navo, kana kushingairira kushandira kune ari nani mamiriro iwe pachako.
Vamwe vanhu vanogara vachiwana nzira yekukuisa pasi uye kukuita kuti unzwe kushatirwa nemararamiro aunoita hupenyu hwako. Iri harisi basa ravo (kunze kwekunge urikuita chimwe chinhu chinotyisa zvinotyisa!) Uye ivo havana kodzero yekuita kuti unzwe kusakwana kana kupusa.
Hazvina mhosva kuti sei akarara kumashure uye akasununguka iwe uri, kana kugutsikana nehupenyu hwako iwe ungave uri, zvakaoma kuti usashatirwa pane dzimwe nguva.
Vanhu vasina kudzika vanowanzoedza nepavanogona napo kuti varambe vachikutarisa uye vachikumisikidza, kazhinji netariro yekupindura kukuru kubva kwauri.
Usazvitsamwira pachako kana izvi zvikaitika, iwe unongova munhu, mushure mezvose, asi edza kuve nedzimwe nzira dzekugadzirisa mamiriro aya.
nei vamwe vanhu vasina shamwari
kunaka sei kana iwe wakashata
zviratidzo anokuda iwe kupfuura kubatirira
nzira yekuudza kana yako inokwezva
hunhu hweshamwari yakanaka
zvinhu zvinoita kuti ubvunze hupenyu